Kukho umnyinyiva kwi nkxalabo yamanzi, emva kwe mvula | News24
Kukho umnyinyiva kwi nkxalabo yamanzi, emva kwe mvula
Izakuthi iqale ngokusesikweni imigqaliselo emitsha elawula ukusetyenziswa kwamanzi kumasipala ombaxa wesiXeko saseKapa ngoMvulo weveki ezayo, ukusuka kwibakala lesithandathu ukuya kwibakala lesihlanu.
Oko kuza kuthi kunike uluntu umnyinyiva ekusebenziseni amanzi, emva kweenyanga eziliqela zoxinzelelo kwindlela yoku sebenzisa amanzi.
Ngokwe migqaliselo emitsha, uluntu luza kuvunyelwa lusebenzise iilitha ezingama 70 umntu ngamnye ngosuku, ukusuka kuma 50.
Oku kulandela iimvula ezithe gqolo ukunetha zikhokhelela ekwenyukeni kwezinga lamanzi kumadami ephondo.
Ngokwengxelo ekhutshwe sisiXeko saseKapa ebutsheni beveki, izinga lamanzi kuma dami ephondo lwenyuke ngomyinge wesine ekhulwini, kwisithuba seveki laya kutsho kuma 74 ekhulwini.
Nangona kunjalo, isiXeko sibongoza uluntu ukuba luthi gqolo ukusebenzisa amanzi ngobunono.
Sikwadize ukuba, logama kubekho ukwenyuka kwezinga kuma dami, kubekho nokonyuka kwindlela uluntu olusebenzise ngayo amanzi kwiveki ephelileyo, ukusuka kwizigidi ezingama 505 elitha ukuya kuthi ga kwizigidi ezingama 511.
“IsiXeko sibongoza uluntu ukuba luthi gqolo ukusebenzisa amanzi ngobulumko kwiinyanga ezizayo njengoko kusiza iinyanga zehlobo,” ihambise yatsho imbalelwano enikezwe amaziko endaba.